Puntland oo amar kasoo saartay isku soo baxa Jimcaha ee Boosaaso | KEYDMEDIA ONLINE
Puntland oo amar kasoo saartay isku soo baxa Jimcaha ee Boosaaso
Dowlad goboleedka Puntland ayaa war kasoo saartay kulan isku soo bax dadweyne ah oo lagu muujinayo sida looga soo horjeedo khudbadii madaxweyne Deni, waxa ayna mamnuucday qabashada kulankaas.
BOOSAASO, Soomaaliya - Dowlad Goboleedka Puntland ayaa amar kasoo saartay isku soo bax la qorsheynayo inuu ka dhaco maalinta Jimcaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari.
Taliye ku-xigeenka qaybta Bari Yuusuf Cabdi Cartan oo warbaahinta la hadlay ayaa waxaa uu sheegay in ay mamnuuc yihiin isu-imaatinnada dadweynaha iyo dhammaan nooc kasta oo bannaan bax ah. Iyadoo laga soo horjeedo in ay dareenkooda soo bandhigaan shacabka ku dhaqan magaalada Boosaaso oo sida la sheegay ka xumaaday khudbadii madaxweyne Deni ka jeediyay xarunta hay'adda cilmi baarista ee PDRC.
Yuusuf Cabdi ayaa tilmaamay inay ka go’an tahay sugidda amniga magaalada Boosaaso iyo ka hortagga in fowda laga sameeyo gudaha magaalada, isla markaana shacabka ugu baaqay inay qaatan go’aanka soo baxay ee lagu joojiyay isku imaatinka dadweynaha.
Maalinta Jimcaha oo ku beegan 26 Febaraayo 2021 waxaa lagu wadaa in ay ka kala dhacaan magaalooyinka Muqdisho iyo Boosaaso isku soo bax lagu diidan yahay labada madaxweyne ee kala ah Farmaajo iyo Deni, labadaba waxaa looga soo horjeedaa madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Puntland, waxayna labadoodaba amreen in la baajiyo kulankaas iyadoo toddobaadkii hore la baajiyay kulan isku soo bax dadweyne ah kaasoo ka dhici lahaa fagaaraha Daljirka Dahsoon ee magaalada Muqdisho.
Shacabkii isku soo baxay ee dhigi lahaa isku soo baxa ayaa rasaas oodda looga qaaday, hayeeshee Jimcahan ayey mar kale ku baaqeen midowga musharaxiinta madaxweynah Soomaaliya 2021 oo iyagu ku baaqay kulanka inuu qabsoomo.